ဆံပင်ဖြောင့်ဘီး (ဆိုဒ်ကြီး) အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော ဆံပင်ဖြောင့်ဘီးကလေး ဖြစ်ပါသည်။
ခေါင်းဖြီးရုံဖြင့် ဖြောင့်စက်ကဲ့သို့ ဆံပင်ဖြောင့် ပေးနိုင်သော ဘီးဖြစ်ပါသည်။
အပူချိန်ကို လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်နိုင်သော စနစ်ပါဝင်ပြီး plug ထိုးရုံဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြု၍ရသော Electric Comb ဖြစ်သည်။
PK Group Online Shop
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက. https// facebook. com /PK group online shop တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပြီး ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက. 09 955707170. ဆက်သွယ်၍ မှာယူနိုင်ပါသည်။
Delivery ခအား ဝယ်ယူဘက်မှကျခံပြီး မှာယူသည့်ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း အိမ်ရောက်ပို့. ငွေချေ စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ( ရန်ကုန်မြို့အတွင်းသာ)
အမည်: ဆံပင်ဖြောင့်ဘီး (ဆိုဒ်ကြီး)